Korona Fayras oo markale albaaba u garaacay kooxda Juentus – Gool FM
Korona Fayras oo markale albaaba u garaacay kooxda Juentus
Dajiye October 3, 2020
(Turin) 03 Okt 2020. Kooxda kubadda cagta Juventus ayaa shaacisay in labo ka mid ah shaqaalaheeda laga helay caabuqa Korona Fayras, kuwaasoo aan magacyadooda la shaacinin.
Juventus ayaa ku dhawaaqday in kooxdeeda ay gashay xaalad karantiil ah, si loo taxadiro, maadaama uu markale ku soo laabtay caabuqan iyadoo labadan shaqaale laga helay calaamado muujinaya Korona Fayras.
Daniele Rugani, Paulo Dybala iyo laacibkii hore ee kooxda Blaise Matuidi ayaa horay ugu dhacay caabuqa Korona Fayras, kahor inta uusan Fayraska ku soo laaban kooxda markale.
Dib ugu soo laabashada caabuqa Korona Fayras ee kooxda Juventus ayaa imaaneysa ka hor kulankooda, barri oo Axad ay kula ciyaarayaan kooxda Napoli horyaalka Talyaaniga.
Juventus ayaa ku sheegtay bayaan ay ku daabacday boggeeda rasmiga ah in labadan shaqsi uu ku dhacay caabuqa Korona Fayras aysan ka tirsaneyn shaqaalaha farsamada ama waaxda caafimaadka, laakiin sida uu qabo sharciga iyo borotokoolka, kooxda oo dhan ayaa xilligan gashay xaalad karantiil ah.
Taasoo muujineysa in nidaamyada karantiilka ay u ogolaandonto in ay baaritaan maraan, kuwooda aan laga helina ay sii wadan karaan tababarkooda caadiga ah iyo kulamada ay ciyaarayaan, iyagoo aan u ogolaan doonin inay xiriir la sameeyaan cid kasta oo ka baxsan kooxda, halka naadiga uu xaqiijiyay in xiriir joogta ah ay la leeyihiin waaxda caafimaadka ay arintan quseyso.
Kooxaha Leeds United iyo Manchester City oo barbardhac ku kala baxay… +SAWIRRO
Man United oo heshiis la gaartay weeraryahan weyn & xilliga uu soo caga dhigan doonto Old Trafford oo la sii ogaaday